Iwe juru ndi mmadu obi maka omume omeiwu Elisha Abbo | odumblog
Iwe juru ndi mmadu obi maka omume omeiwu Elisha Abbo
posted on Jul. 04, 2019 at 8:15 am
Otu onye omeiwu nke a na-akpọ Elisha Abbo enwetala nkatọ n’aka ndi Naijiria maka otu o siri maa nwanyị na-elekọta nwa akanti ugboro ugboro dịka e si gosi n’ihe onyonyo na ụlọ ahịa na-ere ngwa egwuregwu n’Abuja.
Abbo bụ onye na-anọchị Adamawa North n’ụlọ omeiwu ka ahụrụ ebe o na-ama nwanyi akanti site n’ihe onyonyo ndi Premuim Times tinyere.
Ihe a mere n’ụbọchị iri na otu nke ọnwa May,2019, n’ihu ndi uwe ojii ndi kwesiri ịzọpụta nwanyị a, ma ha kpochiri dịka onye omeiwu siri gwa ha.
Abbo batara ụlọ ahịa n’elekere isii nke mgbede; ya na ụmụnwanyi atọ soro bata ịzụ ihe egwuregwu nke ndi okenye. Mana ka ha bidoro ịzụ ahịa, otu n’ime ụmụnwanyi ndi ahụ bidoro gbọwa n’ime ụlọ ahịa ahụ ugboro ugboro. Ma onye nwe ụlọ ahịa ahụ gwara ya ka ọ pụọ n’ezi n’ihi na ọ bụghị nwata.
Abbo, onye iwe na-ewe maka ọnọdụ nwanyi ahụ, boro onye nwe ụlọ ahịa ahụ ebubo na AC ya adịghị mma nke mere ka nwanyi ahụ rịawa ọrịa. Ka ha na-aba mba, ọ gwara ndi uwe ojii ka ha kpọchie nwanyi new ụlọ ahịa ahụ.
Enyi nwaanyi onye nwe ụlọ ahịa ahụ rịọrọ Abbo ka o wetuo obi, mana Abbo tụgharịrị mawa ya akanti.
Ụdị agwa a akpaliela iwe ndi mmadu. Ihe a ka ndi mmadu kwuru n’igwe Twitter:
Mr. Marcus: Unu ahụla ụdị agwa agbero nke onye omeiwu Elisha Abbo gosiri.
Jack Obinyan: E kwesiri ka achụpụ Abbo n’ụlọ omeiwu ma nyekwa ntaramahụhụ ruru ya.
Muhd El-Bonga Ibrahim: Legodi ụdị ndi omeiwu anyi họpụtara, ndi na-ama mmadu akanti na-enweghi ihere ọ bụla. nwoke a bụ ihe ihere nyere ndi omeiwu nke Naijiria.
A na-achọ ụzọ a ga-esi ahụ nwoke a n’ihi na ọ naghizi aza ekwenti ya. Ozi nke ndi nta akụkọ zigara ya, o nweghi nke ọ zaghachiri.
Onuorah Jennifer July 4, 2019
Ndi Naijiria chọrọ ka ebepụ ego a na-enye ndi Super Eagles: AFCON 2019
Anyị ga-akpọpụ ụmụ anyị na Madonna: Nne na nna ụmụakwụkwọ